“Messi ayaa iga dhigay ciyaaryahan wanaagsan” – Jordi Alba – Gool FM
“Messi ayaa iga dhigay ciyaaryahan wanaagsan” – Jordi Alba
(Spain) 07 Maajo 2019. Daafaca garabka bidix xulka qaranka Spain iyo kooxda Barcelona ee Jordi Alba ayaa wareysi uu ku bixiyay majalada “France Football” wuxuu kaga hadlay xaalada Blaugrana ee xili ciyaareedkan.
Kooxda reer Catalonia ayaa xili ciyaareedkan qarka u saaran inay ku guuleysato saddexleyda taariikhiga ah, xili ay haatanba xaqiijisay ku guuleysiga koobka horyaalka La Liga.
Sidoo kale Barca ayaa fadhida finalka Copa del Rey oo ay kula balansan yihiin kooxda Valencia, iyagoo sidoo kale haatan hal lug kula jira finalka Champions League, kaddib markii ay guul 3-0 kaga soo gaareen Livepool kulankii lugta hore wareega afar dhamaadka ee ka dhacay garoonka Camp Nou.
Barcelona ayaa caawa marti ku noqon doonta garoonka Anfield, si ay kooxda Liverpool u wada ciyaaraan kulanka lugta labaad ee wareega afar dhamaadka tartanka Champions League.
Hadaba Jordi Alba ayaa kahor kulanka caawa wuxuu ka hadlay xiriirka ka dhexeeya isaga iyo Lionel Messi wuxuuna yiri:
“Aniga ahaan, Leo ma uusan isbadalin, xiriirkeena markasta waa si isku mid ah, waa wax fiican, waxaan soo wada ciyaarnay mudo dhan 7 sano, wuxuuna iga dhigay ciyaaryahan aad u fiican, Messi waa ciyaaryahanka ugu fiican aduunka”.
Real Madrid oo miiska u saartay PSG dalab aan ka noqosho lahayn, si ay kaga hesho Mbappé